Nisy ny tsangambato nitsangana nampitondraina ny anarana “Akany Fitahiana”. Nambaran’ny filohan’ny komitin’ny jobily Rakotonandrasana Marcel, fa ny taona 2017 no nanomboka ny fanamboarana ary izao vita ny taona 2019 izao la notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny alakamisy lasa teo. Trano vatom-piangonana izy io, ahitana rihana telo sy efitra telo, trano fidiovana, efitra lehibe fandraisana mpitandrina ary efitra ampiasain’ny mpitandrina, fandraisana ny sampana ary ny sekretera jeneralin’ny fiangonana. Ezaka avy amin’ny mpino kristianina ary vola madiodion’ny fiangonana no nananganana io tsangambato lehibe io. Araka ny fanazavan-dRamatoa Andriamisamanana Julie, mpitam-bolan’ny fiangonana sady mpikambana ao amin’ny birao, nanao fotoam-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny mpino sy ny birao foibe niaraka tamin’ny mpitandrina tamin’io, tao amin’ny fiangonana FJKM Antanety Fitahiana, izay nanasana ny SPAA 10 na “Sinodam-paritany Antananarivo Andrefana”. Nambarany fa tamin’ny alahady lasa teo dia nanao fotoam-pivavahana ny mpino kristianina rehetra, ny ray aman-dren’ny fiangonana, ny zanaka am-pielezana sy ny zanaky ny fiangonana ary taorian’izay dia nisy ny fiaraha-misakafo. Nanotrona ny fotoana ny lehiben’ny distrika, ny delegen’ny Boriborintany fahenina, ny kaomisaria Ambohimanarina, ny sefo fokontany ary ny mpitandrina rehetra andrefana.